August 2021 - Khitalin Media
ယောကျ်ားတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်မှာရှိတဲ့ အရာ(၅)မျို
August 31, 2021 by Khitalin Media
ယောကျ်ားတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်မှာရှိတဲ့ အရာ(၅)မျိုး… ယောကျ်ားတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကို ဆွဲငင်နိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုတွေ လုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာ ခေါင်းအပူခံပြီး စဉ်းစားနေစရာမလိုပါဘူး …။ အကြောင်းကတော့ လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့အဖြေလေးတွေ ရှိပြီးသား မို့လို့ပါပဲ။ အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ယောကျ်ားတိုင်းကြိုက်နှ်စ်သက်ကြတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်မှာရှိတဲ့ အရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ (၁) လွတ်လပ်တယ်။ ယောကျ်ားလေးတွေဟာ လွတ်လပ်ပြီး ကိုယ့်ဖာသာကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချ နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို သဘောကျကြပါတယ်။ တစ်ခုခုဆို ချိတုံချ တုံမဖြစ်ပဲ ကိုယ့်ဖာသာကို လွတ်လပ်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီး ဆုံးဖြတ်တဲ့ အတိုင်းလည်း တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ မိန်းကလေးမျိုးကို သဘောအ ကျဆုံးပါပဲ။ (၂) ထက်မြက်ပြီး အလုပ်ကြိုးစားတယ်။ ယောကျ်ားလေးတွေဟာ ကလေးဆန်တာ မျိုးတွေကို မနှစ်သက်ကြပါဘူး။ တည်ငြိမ်ပြီးအခြေတကျရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို သဘောကျကြပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်ရှိပြီး ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေနဲ့ရပ်တည်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးတွေ၊ ထက်မြက်ပြီး အလုပ်ကို … Read more
“ကိုယ်နဲ့ နဖူးစာ ပါ၊ မပါ တွက်ကြည့်လို့ရတယ်နော် ဆရာ စံဇာဏီဘို ရဲ့ တွက်ချက်နည်းလေးပါ”
“ကိုယ္နဲ႔ နဖူးစာ ပါ၊ မပါ တြက္ၾကည့္လို႔ရတယ္ေနာ္ ဆရာ စံဇာဏီဘို ရဲ႕ တြက္ခ်က္နည္းေလးပါ” မိန္းကေလး ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၊ ေယာက်္ားေလး ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ .. ကိုယ္နဲ႔ နဖူးစာ ပါ၊ မပါ တြက္ၾကည့္လို႔ရပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းေလး ဟာ နာမည္ေက်ာ္ ေဗဒင္ ဆရာ စံဇာဏီဘို ရဲ႕ တြက္ခ်က္နည္း ၊ နည္းလမ္းေလး နဲ႔ အက်ိဳးဆက္ကို ရယူထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ ရဲ႕ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္အားလုံးေပါင္းၾကည့္ ၊ေနာက္ဆုံး ရလာတဲ့ကိန္းတစ္လုံးက အေျဖျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ…..သငၠ 23.4.1991 သင့္ခ်စ္သူက 14.7.1992 သင့္ေမြးေန႔ + သင့္ခ်စ္သူေမြးေန႔ = အေျဖ 23 +4+ … Read more
ငါ့သားမြားအိမျထောငျပွုခဲ့ရငျလေ အမေ ဒါတှမှောခငြျတယျ
အေမကိုခ်စ္တဲ့သားဟာ မယားမခ်စ္ဘူးဆိုတာမ်ိဳးမျဖစ္ပါေစနဲ႔ငါ့သား အေမနဲ႔မိသားစုကိုလဲခ်စ္ပါ မိခင္မ်ိဳးႏြယ္ဝင္ဇနီးသည္ကိုလဲခ်စ္ပါ..အေမ့အတြက္သားေကာင္း အစ္မညီမအတြက္ ေမာင္ေကာင္း၊ အစ္ကိုကာင္းျဖစ္ေပမဲ့ ဇနီးသည္ကို မေကာင္းဘူး ဆိုတာမ်ိဳး မျဖစ္ေစနဲ႔ကြဲ႕ မိသားစုကိုခ်စ္သလို ဇနီးသည္ကိုခ်စ္ေပးပါ….. မိဘအိမ္ ေမာင္ႏွမအိမ္ ဇနီးသည္ မသိဘဲမသြားနဲ႔ငါ့သား သူတို႔မိသားစုေတြ ငါ့ကြယ္ရာ ငါ့ေယာက္်ားကိုဘာေသြးထိုးေနပါလိမ့္လို႔ သူ႔ဖက္ကအျမင္မ်ိဳးျဖစ္ေစတတ္လို႔ တတ္နိုင္ရင္ ငါ့သားမိသားစုဆီသြားရင္ ဇနီးကိုေခၚသြားကြဲ႕ မလိုက္တာေတာ့သူ႔အပိုင္းေပါ့ ေခၚပါရဲ့နဲ႔မလိုက္ပဲ စကားနာထိုးတာ ေသြးထိုးတာလဲလက္မခံနဲ႔ငါ့သား မိသားစုနဲ႔ဇနီးသည္ၾကား သမာသမတ္က်က် မၽွမၽွတတျဖစ္ပါေစ…။ ငါ့လုပ္စာပဲ ငါ့မိဘ ေမာင္ႏွမ ေပးတာ မိန္းမေျပာစရာမလိုဘူး မထင္နဲ႔ငါ့သား အမွားႀကီးမွားမယ္ အေမကေမြး အေမျပဳစုယုယေပးေပမယ့္ အိမ္ေထာင္က်ရင္အေမ မပိုင္ဘူး ငါ့သားေလးရဲ့…. မိန္းမ မသိေအာင္ခိုးေပးျခင္းဟာ အေမ့သိကၡာထိခိုက္သလို ေခၽြးမ အေနနဲ႔ၾကည့္ရင္ သူ႔မာန ထိခိုက္ေစတယ္ ငါ့သားေလးရဲ့.. မိန္းမေရ ဒီေလာက္ ဒီမၽွေတာ့ မိဘေတြကန္ေတာ့ရေအာင္ကြာ … Read more
အရပ္ ၇၀စင္တီမီတာသာရွိၿပီး လူပုေလးျဖစ္ေနေသာ္လည္း ဇနီးေခ်ာေခ်ာေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ အမ်ိဳးသား
အရပ္ ၇၀စင္တီမီတာသာရွိၿပီး လူပုေလးျဖစ္ေနေသာ္လည္း ဇနီးေခ်ာေခ်ာေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ အမ်ိဳးသား တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ အသက္ ၄၅ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ အရိုးႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ေမြးရာပါ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ေရာဂါေၾကာင့္ အရပ္အေမာင္းမွာ ၇၀စင္တီမီတာသာရွိၿပီး ၂ႏွစ္အရြယ္ကေလးတစ္ေယာက္သာသာျဖစ္ေနေတာ့သည္။ အမ်ိဳးသားသည္ ေရာဂါအေျခအေနေၾကာင့္ လူပုေလးျဖစ္ေနခဲ့ရာ သူဧ။္ဘဝတစ္ေလၽွာက္လုံးတြင္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး အျမဲေလွာင္ေျပာင္ ပယ္ခ်ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားသည္ သူဧ။္ျဖစ္တည္ေနေသာဘဝအေျခအေနကို အရႉံးမေပးပဲ အဖြားျဖစ္သူဆီကေန ပန္းခ်ီဆြဲျခင္းအႏုပညာကို တတ္ေျမာက္သည္ထိ သင္ယူခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားသည္ သူဧ။္ပန္းခ်ီဆြဲလက္ရာမွာ လွပေသသပ္ၿပီး ေျပာင္ေျမာက္လြန္းသည့္အတြက္ နာမည္ႀကီးလာခဲ့ၿပီး ဇနီးေခ်ာေခ်ာေလး ႏွင့္ ဆုံေတြ႕ကာ ခ်စ္တဲ့စိတ္တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ သူတို႔ႏွစ္ဦးမွာ လက္ထပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သမီးေလးတစ္ေယာက္ပိုင္ဆိုင္ထားခဲ့ၿပီး ကံဆိုးစြာျဖင့္ သမီးေလးမွာလည္း ဖခင္တူမ်ိဳးရိုးလိုက္ကာ လူပုမေလးအျဖစ္ ေမြးဖြားလာခဲ့သည္။ Credit Unicode အရပ် … Read more
တကိုယ်တော် SHOW မှ နွေဦးတော်လှန်ရေးရန်ပုံငွေ သိန်းရာနဲ့ချီပြီးရှာဖွေပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ တေးရေး/တေးဆို ဆောင်းဦးလှိုင်…
အဆိုတော်ဆောင်းဦးလှိုင်ကတော့သီချင်းကောင်းတွေကိုပရိသတ်ရင်ထဲရောက်အောင်သီဆိုနိုင်သူတစ်ယောက်ပါ။ ဆောင်းဦးလှိုင်က ကိုယ်ပိုင်အမ်ဘမ်များစွာထွက်ရှိခဲ့ပြီးအောင်မြင်ခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာဆောင်းဦးလှိုင်က နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေပေမယ့်စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်တဲ့နွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးမှာ တတ်တတ်ကြွကြွပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင်ဆောင်းဦးလှိုင်ကနွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေရရှိရန်အမေရိကန်နိုင်ငံအနှံ့ တစ်ကိုယ်တော်ဖျောဖြေပွဲတွေပြုလုပ်ပေးနေတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းဦးလှိုင်ကပထမဦးဆုံးဖျော်ဖြေပွဲကနေရန်ပုံငွေအများအပြားရရှိခဲ့ကြောင်းဝမ်းသာစွာပြောပြလာပါတယ်။ Boston ပွဲပြီးဆုံး Albany NYသို့ရောက်ရှိBoston ပွဲမှာြ မို့ခံတွေမျှော်လင့်ထားတဲ့$ 20000 ထက်ပိုတဲ့ရံပုံငွေကိုရှာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးကြိုးစားခဲ့ကြလို့ပါ။ အသေးစိတ်ကိုနောက်တော့ထပ်မံတင်ပြပေးပါ့မယ်။ အခု Albanyမြို့ကိုရောက်နေပါပြီ။ မနက် ၂နာရီပါ။ ဒီနေ့ညနေ Albany ပွဲမှာထပ်မံကြိုးစားပါ့မယ်ဆိုပြီးဆောင်းဦးလှိုင်ကပြောပြလာတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူအပေါင်း ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ ဘေးဘယာဝေကွာပြီး လိုရာပန်းတိုင်ကို အမြန်ရောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Credit Tags:တကိုယ်တော် Show မှ နွေဦးတော်လှန်ရေးရန်ပုံငွေ သိန်းရာနဲ့ချီပြီးရှာဖွေပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ တေးရေး/တေးဆို ဆောင်းဦးလှိုင်…
ေယာက်ာ္းဆိုတာ ဘယ္ေလာက္ရာထူးအာဏာရွိရွိ ‌ေအာင္ျမင္မူေတြဘယ္ေလာက္ပဲရရေ ငြေၾကးဥစၥာေတြဘယ္ေလာက္ပဲခ်မ္းသာေနေန ပညာေတြဘယ္လိုပဲတက္တက္ အရွက္တရားမရွိ ကိုယ္က်င့္တရားမေကာင္းခဲ့ရင္ အလကားပါပဲ။ ေယာက်ၤားတစ္ခ်ိဴ႕က ကိုယ့္ရဲ႕ကိုယ္က်င့္တရား ‌ေဖာက္ျပားမူေတြကို ‌ေငြေၾကးဥစၥာေတြနဲ႔ ဖုံးဖိၿပီး ရာထူး ဂုဏ္အရွိန္အဝါေတြနဲ႔ ဆီးကာလို႔ လုံႏိုင္လွၿပီလို႔ ထင္တတ္ၾကတယ္။ လူ႔ပါးစပ္တစ္ေပါက္ဆိုတာ ဆန္တစ္တင္းနဲ႔ဖို႔ေတာင္ မလုံႏိုင္တာ ကိုယ့္ရဲ႕စာရိတၱပ်က္ျပားမူေတြကို အမ်ားက မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတာသာရွိမယ္ မသိပဲေနပါ့မလား? ေယာက်ၤားေကာင္းေတြဆိုတာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ လူမျမင္ကြယ္ရာမွာ ရွိခဲ့ရင္ေတာင္ တစ္နပ္စားဥာဏ္နဲ႔ မႀကံစည္ဘူး။ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကေ ရလာေျမာင္းေပးလာရင္ေတာင္မသာယာတတ္ဘူး။ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္က အခြင့္အေရးေပးခဲ့ရင္ေတာင္ အခြင့္အေရးမယူဘူး။ ေယာက်ၤားေကာင္းဆိုတာ ကိုယ့္ခ်စ္သူကို အခြင့္အေရးရရင္ေတာင္ အခြင့္အေရးမယူပဲ စည္းေဘာင္အတြင္းမွာ တန္ဖိုး ထားမူနဲ႔ သစၥာရွိတတ္ၾကတယ္။ တစ္ကယ့္ေယာက်ၤားေကာင္းေတြဆိုတာျဖစ္ခ်င္တာထက္ျဖစ္သင့္တာကို ဦးစားေပးလို႔ ကိုယ္က်င့္သိကၡာကို တန္ဖိုးထားၿပီး အခ်စ္ဆိုတာကို ဦးေႏွာက္နဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ ကိုယ့္သမိုင္းကို လွပေအာင္ ‌ေရးဆြဲႏိုင္ၾကသူေတြျဖစ္တယ္။ Zawgyi … Read more
ခြောကလကျကို နေ့တိုငျး စားပေးသင့ျတဲ့ အခကြျ (၅) ခကြျ
ချောကလက်ကို နေ့တိုင်း စားပေးသင့်တဲ့ အချက် (၅) ချက် ချောကလက် ကြိုက်သူတွေက ချောကလက်တွေကို အများကြီး စားတတ်လို့ တခါတလေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင် သံသယ ရှိလာမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ချောကလက်ကြိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ် စိတ်ပူစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ အနက်ရောင် ချောကလက်မှာ ကိုကိုး ပါဝင်မှုနှုန်းများလို့ အတော်ကို အရသာ ရှိပါတယ်။ ဒါတင် မကပါဘူး။ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အလွန်ကို သင့်တော်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးရှိတဲ့ ချောကလက်ကို နေ့တိုင်းစားပေးသင့်ပါတယ်။ (1) စိတ်ဓာတ် တက်ကြွစေတယ်။ အနက်ရောင် ချောကလက်ကို အနည်းငယ် စားပေးရုံနဲ့ အလုပ်တွေကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ လုပ်ကိုင်နိုင်မှာပါ။ အနက်ရောင် ချောကလက်မှာ အမိုင်နိုအက်စစ် ပါဝင်ပါတယ်။ အမိုင်နိုအက်စစ်က ဦးနှောက်ကို မှတ်သားနိုင်စွမ်းမြင့်မားစေပါတယ်။ စိတ်ကိုလည်း … Read more
ရူးလောက်အောင်ချစ်ခဲ့ရသူကို မေ့ပျောက်အောင်ကြိုးစားနည်း လူတိုင်းဟာ အချစ်ဦးနဲ့ လက်တွဲခွင့်မရတတ်ကြပါဘူး။ အချစ်ဦးတင်မဟုတ်ပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ အချစ်ဆုံးဆိုသူတွေနဲ့လည်းကွဲကွာတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုကွဲကွာတဲ့အခိုက်အတန့်မှာ ခံစားရတဲ့ဝေဒနာမျိုးဟာ ပြောမပြတတ်လောက်အောင်နာကျင်ရပါတယ်။ ရူးလောက်အောင္ခ်စ္ခဲ့ရသူကို မေ့ပေ်ာက်အောင်ကြိုးစားနည်း အချို့သူတွေကတော့ နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာ အနည်ကျသွားပေမယ့် အချို့သူတွေကတော့နှစ်တွေအများကြီးကြာသွားတာတောင် အနည်မထိုင်ပဲရှိနေတတ်ပါတယ်။ အသဲကွဲခြင်းက ရေရှည်ဖြစ်နေပြီး မိမိကိုယ်ကို လွင့်ချင်ရာလွင့်ပါစေဆိုပြီး မျှောထားတဲ့လှေ တစ်စင်းလိုပြုမူနေရင်တော့ သင့်ဘဝကို အမြန်ဆုံးပြုပြင်သင့်ပါပြီ။ အောက်ပါအချက်တွေက သင့်ရဲ့အချစ်ရဆုံးကို ချက်ချင်းကြီးမေ့အောင်တော့ မကူညီနိုင်ပေမယ့် အချိန်အမြန်ဆုံးမေ့အောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာတော့ ကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ (၁) ပထမဆုံးသင်သတိရဖို့က အချိန်တွေအများကြီးရှိသေး တယ်ဆိုတာပါပဲ။ သင့်ရဲ့အချစ်ဆုံးကို ဘယ်လောက်ကြာရင် မေ့နိုင်အောင်ကြိုး စားမယ်ဆိုပြီး ပုံသေကြီးချမထားပါနဲ့။ ဒီအချက်ကသူ့ ကိုပိုပြီးသတိရစေပါတယ်။ အချိန်ကတဖြည်းဖြည်း ကုစားသွားမယ်ဆိုပေမယ့် အဲ့ဒိအချိန် ရူးလောက်အောင္ခ်စ္ခဲ့ရသူကို မေ့ပေ်ာက်အောင်ကြိုးစားနည်း ဆိုတာကြီးကို ခဏခဏခေါင်း ထဲမရောက်ပါစေနဲ့။ သင်ကအချိန်ကာလာအကန့်အသတ်ပေးထားရင် အချိန်ပြည့်လို့ မမေ့နိုင်သေးရင် ပိုပြီးတော့တောင်သူက … Read more
အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူသိနည်းတဲ့ အချက်များ
အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူသိနည်းတဲ့ အချက်များ စွမ်းအားကြီးမားပြီး စိန်ခေါ်မှုတွေကို နှစ်သက်တဲ့ အင်္ဂါသား၊ သမီးတွေဟာ အခက်အခဲတွေနဲ့တွေ့ရင် အရှုံးမပေးဘဲ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင် တဲ့သူ၊ မိသားစုအတွက် ရှေ့ကနေ မားမားမတ်မတ် ကာကွယ်မယ့်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်၊ စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်း ကောင်းကောင်း ကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး အောင်မြင်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိကြတဲ့ အင်္ဂါ သား၊ သမီးလေးတွေရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်သမျှကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ဖွင့်ဟလေ့ မရှိတာကြောင့် အချစ်ရေးမှာ အထီးကျန်တဲ့ ခံစားချက်မျိုး အမြဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို စကားလုံးတွေနဲ့ နာကျင်အောင်ပြောဆိုတတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုးရှိပြီး အဲ့ဒီအကျင့်ကြောင့် တကယ်ချစ်တာ မဟုတ်ဘူးလို့သတ်မှတ်ခံရတတ်ပါတယ်။ ရိုမန်းတစ် မဆန်တတ်ဘဲ တဲ့တိုးပြောတတ်တဲ့ သူတွေ၊ ချစ်တာကို အပြောနဲ့မဟုတ်ဘဲ လုပ်ရပ်နဲ့သက်သေပြတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ မရိုတတ်ပေမယ့် အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကာကွယ်ပေးမယ့်၊ … Read more
ရုပရြညမြလှလညြး တနဖြိုးရှိတဲ့ မိနြးကလေးဆိုတာ
ရုပ်ရည်မလှလည်း တန်ဖိုးရှိတဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ (၁) မနာလိုစိတ် မရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ အေးဆေးပီး တည်ငြိမ်တယ်။ မျက်နှာက လမင်းလို ကြည်လင် ဝင်းပတယ်။ (၂) အမုန်းရန်ငြိုးမရှိတဲ့ မိန်းကလေး တွေဟာ နူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်။ မျက်ဝန်းထဲမှာ စစ်မှန်တဲ့ ရိုးသားမှုတွေ ရှိတယ်။ (၃) စကားပြော ညင်သာပျော့ပျောင်းပြီး စကားကြမ်းမပြောတဲ့ မိန်းကလေး တွေဟာ ပန်းလေးတစ်ပွင့်နဲ့ တူတယ်။ ခူးယူသူရဲ့ လက်ကို ရနံ့တွေနဲ့ မွှေးကြိုင်စေတယ်။ (၄) ရမ္မက်လောဘ ကင်းရှင်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ မြင့်မြတ်တဲ့ ရုပ်ကိုဆောင်တယ်။ ရည်မွန်ကျော့ရှင်းတယ်။ (၅) စိတ်ကြီးမဝင်တဲ့ မိန်းကလေး တွေဟာ ရိုးသားစစ်မှန်တယ်။ စိမ့်စမ်းရေလို အေးမြတယ်။ (၆) သက်ရှိတွေအပေါ် ချစ်ခင် နှစ်သက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ တန်းတူမေတ္တာနဲ့ ပေးဆပ်တဲ့ … Read more